Vaovao - Toetra tombony azo amin'ny latabatra
1. dian-tongotra kely
Araka ny tiana holazaina amin'ny anarana dia latabatra azo aforitra ny latabatra aforitra. Ity no singa famoronana fototra indrindra amin'ny latabatra mihodina. Raha voafetra ny habaka ao an-tranonao, marina? Tena ilaina ho anao ny latabatra mivalona, ​​sokafy rehefa mila azy ianao, aforeto rehefa tsy mila azy ireo, ary apetraho, mamonjy toerana be dia be.
Raha ny tena izy, ny vidin'ny latabatra aforitra dia matetika tsy dia lafo loatra, noho izany dia fanaka mamoritra tena ara-toekarena, mitondra fahafaham-po amin'ny fiainantsika hitondra haingana miaraka amin'izay koa, nefa koa hitsitsy ny fandaniantsika.
3.You afaka manitsy ny zoro malalaka
Ny iray, ambany ny vidin'ny milina famolavolana, indrindra ny bobongolo amin'ny bobongolo
Rehefa mamorona vokatra mitovy amin'izany, ny vidin'ny milina famolavolana kapoka dia manodidina ny 1/3 ~ 1/2 an'ny milina fanindronana, ny vidin'ny vokatra dia ambany ihany koa.
Faharoa, tsara ny fahombiazany
Amin'ny famolavolana fofona, ny lozisialy dia miorina amin'ny lohan'ny milina eo ambany tsindry ambany ary amin'ny tsindry ambany, ny ankamaroany dia 0.2-1.0Mn. Fanapoahana, ka ny adin-tsaina sisa tavela amin'ny vokatra dia kely, marefo, misy fiantraikany, miondrika ary ny tontolon'ny fihenan'ny tontolo iainana dia avo kokoa, noho izany, manana fahombiazana tsara kokoa. Amin'ny famolavolana tsindrona, ny miempo dia mamakivaky ny mpihazakazaka amam-bika sy ny vavahady amin'ny tsindry avo (15-140yPA), izay mitarika fizarana adin-tsaina tsy mitovy.
Ohatra, seza famaohana, seza famaohana poakaty dia ampitahaina amin'ny seza FRP sy seza tsindrona plastika mafy hafa. 1. Mahazo aina, firafitra poakaty avo roa heny, feno elastika, seza ahazoana aina; 2.2, fanoherana ny fiantraikany, fanoherana ny hafanana, fanoherana rano tsara, tsy noho ny masoandro, orana, vokan'ny fanala vokatry ny famakiana sy ny fahasimbana.3, fanoherana ny akora simika ankapobeny, fanoherana menaka tsara, rehefa misy tasy solika, tasy, mora esorina .
Izy io dia misy fiatraikany mahery vaika sy fananana manohitra ny famaky
Ny lanjan'ny vinina avo lenta (PE) dia manana lanjan'ny molekiola ambony kokoa noho ny plastika misy tsindrona. Noho izany, ny vokatra mitsoka dia misy fiatraikany lehibe ary fanoherana avo lenta ny fiakaran'ny tsindry tontolo iainana, mety amin'ny famokarana fonosana na detergent fitaterana ary simika. kaontenera na barika reagent.
Efatra, mora mamokatra rindrin'ny hatevin'ny vokatra mitovy amin'ny famolavolana
Satria ny bobongolo bobongolo dia tsy voaforon'ny bobongolo ratsy fotsiny, ny hatevin'ny rindrin'ny vokatra azo ovaina amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny elanelam-pahafatesana na ny fantsom-panafody ao amin'ny lohan'ilay masinina, izay tena mahasoa ny vokatra izay tsy afaka mikajiana tsara ny hatevin'ny rindrina takiana. mialoha ny vola lany amin'ny fanovana ny hatevin'ny rindrin'ny vokatra dia avo kokoa noho ny famolavolana tsindrona. Ny famolahana ambany dia afaka mamokatra vokatra misy hatevin'ny rindrina kely ihany koa, izay tsy azo vokarina amin'ny famolavolana tsindrona.
Ny famolahana tsoka dia afaka mamokatra vokatra tsy ara-dalàna sy tsy miangatra miaraka amina endrika sarotra
Mifanohitra amin'ny famolavolana tsindrona, mba hamokarana vokatra roa na maromaro, amin'ny alàlan'ny fehin-kibo, ny fihaonan'ny solvent na ny fantsom-pandrefesana ultrasonic. Ohatra, ny latabatra famolahana plastika misy endrika sarotra dia vokarin'ny teknolojia famolavolana.